Iinkcukacha ezibalulekileyo ngoHerbert Hoover
Iingcaciso ezibalulekileyo ngoHerbert Hoover
UHerbert Hoover wayengumongameli weshumi-nanye we-United States. Wazalwa ngo-Agasti 11, 1874, eWest Branch, e-Iowa. Nazi iinqununu ezilishumi ezizaziyo malunga noHerbert Hoover , obengumntu kunye nomsebenzi wakhe njengomongameli.
Mongameli wokuqala weQuaker
UMongameli uHerbert Hoover kunye noMongameli wokuqala uLow Henry Hoover. I-Getty Izithombe / Iifayile ze-Archives / IfowuniQaphela
UHoover wayengunyana womkhandi, uJese Clark Hoover, kunye nomphathiswa weQuaker, uHuldah Minthorn Hoover. Bobabini abazali bakhe befile ngeli xesha elinesithoba. Wayehlukana nabantakwabo waza wahlala nezihlobo apho waqhubeka ekhuliswe ukholo lweQuaker .
Utshatile uLow Henry Hoover
Nangona uHoover engazange aphumelele esikolweni esiphakeme, waya eSyunivesithi yaseStanford apho wadibana nomfazi wakhe, uLow Henry. Wayengumfazi ohloniphekileyo wokuqala . Kwakhona wayebandakanyeka kakhulu kwi-Girl Scouts.
Ubalekele iBabeleer Rebellion
UHoover wahamba nomfazi wakhe ngolunye usuku ukuya eChina ukuba asebenze njengonjiniyela wezotayini ngo-1899. Bayalapho xa i- Boxer Rebellion yaqhambuka. AbaseNtshona bajoliswe yiBhokisi. Baye baxinwa ngabanye ngaphambi kokuba bakwazi ukusinda kwisikhephe saseJamani. I-Hoovers yafunda ukuthetha isiTshayina ngeli xesha kwaye yayisoloko isathetha kwiNdlu ye-White xa ingafuni ukuva.
Ukulwa kweMfazwe yoNcedo kwiMfazwe Yehlabathi I
I-Hoover yaziwa kakuhle njengomququzeleli osebenzayo kunye nomlawuli. Ngexesha leMfazwe Yehlabathi yokuqala , wadlala indima ephambili ekuhleleni imizamo yokunceda imfazwe. Wayeyintloko yekomiti yaseMerika yoNcedo eyancedisa abantu abangama-120 000 baseMerika ababanjwe eYurophu. Kamva waphuma kwiKhomishoni yokuXhaswa kweBelgium. Ukongezelela, wabakhokelela kwi-American Food Administration kunye ne-American Relief Administration.
Nobhala wezoRhwebo ngoBongameli ababini
UHoover wayekhonza njengoNobhala wezoRhwebo ukusuka ngo-1921 ukuya ku-1928 phantsi kweWarren G. Harding noCalvin Coolidge . Wadibanisa isebe njengeqabane lamashishini.
Ngokukhawuleza Won Ukhetho luka-1928
UHerbert Hoover wabaleka njengeRephabliki kunye noCharles Curtis okhethweni luka-1928. Bamsula lula uAlfred Smith, umKatolika wokuqala ukuba asebenzele iofisi. Wafumana 444 kuma-531 amavoti okhetho.
UMongameli Ngexesha Lokuqala Lokudakumba Okukhulu
Kwiinyanga ezisixhenxe kuphela emva kokuba ngu-president, iMelika yabona ukuhla kweyokuqala enkulu kwimarike yemasheya kwinto eyaziwa ngokuba nguMnyama ngoLwesine, ngo-Oktobha 24, 1929. NgoLwesibini umhla wama-29, ngo-1929, uMnyama oMnyama wabuya, kwaye i- Depression Depression yaqala ngokusemthethweni. Ukudakumba kwakubuhlungu emhlabeni jikelele. E-Amerika, ukungabikho kwemisebenzi kwenyuka kuma-25 ekhulwini. UHoover wayevakalelwa kukuba ukunceda amashishini abe nefuthe lokuncedisa abo banobuhlungu kakhulu. Nangona kunjalo, oku kwakungancinci, ukukhawuleza kwaqhubeka kukhula.
Bambona i-Smoot-Hawley Intlawulo yezoRhwebo eziManyeneyo
I-Congress yadlulisela intlawulo ye-Smoot-Hawley ngo-1930 leyo yayijoliswe ekukhuseleni abalimi baseMerika ekukhuphiswano kwamanye amazwe. Nangona kunjalo, ezinye iintlanga emhlabeni jikelele azizange zithathe le nto zilele phantsi kwaye zikhawuleze zibala kunye neerhafu zazo.
Ukuqhubana neBhonus Marchers
Ngaphantsi koMongameli uCalvin Coolidge, iinqwelo-mkhosi zanikezelwa i-inshurensi yebhonasi. Kwakuza kuhlawulwa kwiminyaka engama-20. Nangona kunjalo, ngoxinzelelo olukhulu, ama-15,000 e-veterans ayehamba eWashington, DC ngowe-1932 efuna ukuhlawulwa ngokukhawuleza. I-Congress ayizange iphendule kwaye i-'Busus Marchers 'yakha ama-shantytown. I-Hoover yathumela uGeneral Douglas MacArthur ukuba axhoxise abaphathi bezilwanyana ukuba bahambe. Baye basebenzisa iitanki kunye ne-gas to tear them to leave them.
Kwakunemisebenzi ebalulekileyo yolawulo emva koMongameli
I-Hoover yilahleka ukulahlekelwa kwakhona kwiFranklin D. Roosevelt ngenxa yemiphumo yoLwaphulo Olukhulu. Waphuma emhlala phantsi ngo-1946 ukuze ancedise ukulungelelanisa ukutya kokumisa indlala kwihlabathi jikelele. Ukongezelela, wakhethwa ukuba abe ngusihlalo weKomishoni yeHoover (1947-1949) eyayibekwe umsebenzi wokulungelelanisa igatsha elilawulayo likarhulumente.
UZachary Taylor: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
5 Ulawulo loMongameli oluphambili ukuqonda iNdlu ye-White House kaDonald Trump
5 Oomongameli Ababethelelwa Ngamalungu eNkongolo
Imali yokuthetha yabaPhathi abengama-Top $ 750,000
UJames Madison: Iinkcukacha ezibalulekileyo kunye ne-Biography efutshane
Izinto Ezilishumi Zokumazi NgeWarren G. Harding
Falalalala - IKarimesi yeKrisimesi yeKarimesi
I-Chemistry Izibhalo Ukuqala ngeleta M
World Wild of Tantra
Iingcali ezi-4 zeBebop
Zingakanani Abacwangcisi bezakhiwo?
Iingcebiso zePainting Acrylic kubaqalayo
Ukususela kuJoe ukuya eBot: Intetho yam intetho kunye noDonovan Patton
Udliwano-ndlebe: U-Zooey Deschanel Uthetha Nge 'Elf'
Yintoni i-Stimpmeter kwaye isetyenziswe njani?
Ngowe-1932 Matshi we-Bonus Army
"Isikhokelo sokuFundisisa iMetamorphosis"
Iingcaphuno zoMculo zothando
Ukuqonda Ukuchazwa koMgqirha weDkt
Iikholeji zase-Washington State
Oko Okufuneka Ukwazi Ngo-Commedia dell'Arte
Imbali Yokunqanda eMelika
IYunivesithi yaseTennessee eCattanooga Admissions
Imiba emihlanu engaqhelekanga malunga nobuBuddha
Ukuqonda i-Economic "Wedge"
UAdolf Hitler wayengumKristu
I-Paleolithic ephezulu-Abantu baNamhlanje bathatha ihlabathi